A na -emegharị "anya" nke nsonaazụ ọchụchọ ọhụrụ | Androidsis
Google na-enye “nlebanye anya” ọhụrụ na nsonaazụ ọchụchọ nke ngwa
Manuel Ramirez | | Noticias, Nkuzi
Google na-eso renovating ọ bụla nook na cranny nke gam akporo N'ịgbalị ime ka sistemụ arụmọrụ a maka ngwaọrụ mkpanaka gaa na ahụmịhe nke ọhụụ mgbe onye ọrụ nọrọ oge na Storelọ Ahịa Play, ọ na-agbatị ogwe ngosi na gam akporo 5.1 ma ọ bụ ọbụna pịa na igodo mebere maka ngwa mepere emepe n'oge na-adịbeghị anya. Lollipop arụwo ọtụtụ ihe maka nke a na kpọmkwem Marshmallow ga-aga n'ihu n'ihu nnukwu mmelite aesthetics na interface.
Ugbu a mesie agba na interface nke nsonaazụ ọchụchọ nke ngwa mgbe emechara Google Ugbu a site na iji okwu a "ngwa" na-eso ọchụchọ. Chọọ "ngwa igwefoto" yana mosaic nke ngwa nwere agba dị iche iche ga-apụta n'ihu anyị ma e jiri ya tụnyere ihe ọ dị na mbụ yana nsonaazụ ndị na-adịghị mma na akụkụ a na-ahụ anya. N’okpuru ị ga - ahụ vidiyo nke atụmatụ a retouched nke na - aga maka ihe niile anya.
1 Akụkụ kachasị mma kachasị mma
2 N'oge a naanị na gam akporo
Akụkụ kachasị mma kachasị mma
Site na nchọta nchọta nke onye ọ bụla nwere ike ịnwe na desktọọpụ nke gam akporo ekwentị, ha nwere ike pịnye "ngwa igwefoto". Emeela ya ga-egosi anyị a dum Mozis nke ngwa ọdịnala na ha dị iche iche na agba dị ka ndị nke ngwa ọ na-anọchi anya. Pịa na bọtịnụ gbasaa na ngwa ndị ọzọ na-aga n'ihu na-egosi na ihe ngosi ziri ezi nke na-atụgharị igodo na nyocha n'ime ihe dị ezigbo ụtọ.
Nsonaazụ ọchụchọ ndị a gosi otu ozi dị ka akara na akara ule natara, ọnụ ọgụgụ akara a natara na ma ọ bụ n'efu ma ọ bụ akwụ ụgwọ. A nnọọ gbanwere visual akụkụ ma ọ bụrụ na anyị na-atụnyere ya nke nke Google search ngwa ya onwe ya na iOS, nke bụ nnọọ rickety n'ụzọ dị otú a nke na-eweta ngwa dị ka ị pụrụ ịchọta ke mbiet n'okpuru.
N'oge a naanị na gam akporo
Ọ gaghịkwa eju anyị anya na ụdị ọhụụ a dị ọhụụ ugbu a naanị na gam akporo. Na iOS ị ga-echere ntakịrị ebe ọ bụ na n'oge a anyị amaghị ma ndepụta nke ngwa ahụ na enweghị ndụ na agba, nke ọ bụla na-ejikọ ngwa ahụ, ga-erute ụfọdụ maka ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ a. Ekwentị mkpanaaka maka ekwentị Apple.
A na-ewepụta atụmatụ a ugbu a, ya mere i nwere ike na-aga site na search mmanya si na ekwentị gị nwalee ya. N'ime nke m, ha apụtala mgbe ị na-eme ụfọdụ nyocha na eziokwu bụ na ọ dị oke mma.
Maka ndị ọzọ, omume dị na visual nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu dị ka otu n'ime ụkpụrụ nduzi kasịnụ nke Google maka gam akporo na nke ahụ agaghị adị ebe a, ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime ebumnuche bụ isi maka afọ ole na ole. A na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ, mana ha na-eji ihe ịchọ mma kachasị mma na-abịa mgbe niile, Android Lollipop bụ ebe Google tinyere mgbaghari na nke a.
Niile nkọwa site na Google na ọ bụ ezie na ọ naghị agbakwunye enweghị atụmatụ ọhụrụ ma ọ bụ na atụmatụ, ọ na-enye anyị mmetụta ndị ọzọ mgbe anyị na-achọ ngwa site na Google Ugbu a ma ọ bụ wijetị ọchụchọ Google ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-enye “nlebanye anya” ọhụrụ na nsonaazụ ọchụchọ nke ngwa
Twitter na-enye gị ohere ịtọ tweet na profaịlụ gị site na gam akporo na iOS
Comparison Doogee Valencia 2 Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X na ule ọsọ